मत्स्यपोखरीमा साहित्यिक मेला किन ? « Emakalu Online
चिचिला गाउँपालिका वडा नं. ४ को बिच भागमा घुम्टोभित्र लुकेकी सुन्दरी स् मत्श्यपोखरी । पोखरीभित्र अनेकौ जलपरी छ । काठमान्डौबाट विमानमा गए तुम्लिङटारबाट ३० मिनटमा ट्याक्सी चढेर खाँदबारी बजार पुगिन्छ । बस चढेर गएमा धरानबाट धनकुटा, हिले, मांमाया हुँदै अरुण किनारै किनार ७ घन्टामा खाँदबारी पुगिन्छ । खाँदबारीबाट चिचिलासम्म बस पुग्छ र बस पुग्नलाई १ घन्टा लाग्छ । बासका झ्यालबाट, सिजनमा पांमा, सेकाहातिर पहेँला सुन्तला र धानका बालाहरु हेर्दै जान पाइन्छ । छयाङ्कुटी डाँडा यहाँको इफल टावर हो, बादल नलागेका बेला यहाँबाट मकालु, खेम्पालुङ्ग र कन्चनजङ्गाको मुस्कानलाई नजिकैबाट अनुभव गर्न पाइन्छ । छ्याङ्कुटीबाट चिचिला जाँदा गाडी कहिले बिशाल रुखका छाँयामा, कहिले घामका प्रकाशमा टिलिक्क टल्किँदै जान्छ र चिचिला बजार देखिन्छ । चिचिला डाँडो मिनीबजार चिचिलाको पालिका केन्द्र मात्र होइन दार्जिलिङको चौरास्ता जस्तै मनमोहक छ ।
यसपूर्व सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट उद्घाटित मकालु हिरक महोत्सव आयोजना भएको चिचिला गापा।प्रदेश नं। १ कै सानो गाउँपालिका, दिदिङ र मत्श्यपोखरी दुइपालिका समायोजन गरेर बनेको । चिचिला डाँडा गाउँपालिकाको केन्द्र, गाउँपालिका अफिस रहेको ठाउँ, प्रहरी चौकी, सेन्चुरी बैकको शाखा र दुइओटा सुविधासम्पन्न होटल सहित २५ ओटा जति साना ठूला पसल भएको बजार, दायाँपट्टीको पाटोमा चिया बगान बायाँपट्टिको पाटोमा अलैँची बगान छ । मौसम सफा हुँदा यहाँबाट उत्तरतिर मकालु हिमाल र खेम्पालुङ हिमालको चुली पर्वतमाला सहित देखिन्छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीको बाहुलीबाट मकालु हिरक महोत्सव र मकालु हिरकपार्क उद्घाटन भएको चिचिला बजारमा नै हो । बजारबाट २०० मीटर उत्तरमा थुम्की छ, थुम्कीका डाँडाकाँडाहरु सम्याएर पालिका भवन निर्माणको लागि टार बनाइएको छ । दन्त्यकथामा राक्षसले डाँडाकाँडा सम्याउँछ भनेझैँ डोजरले सम्याएको यो डाँडो प्राकृतिक धरहरा नै हो । यस डारको एक छेउमा शिवालय मन्दिर बनाईएको छ । बुद्धपार्क र बलुथान टावर चिचिलाबाट १० मिनेट बसमा गएपछि आउने कुवापानीबाट देब्रेपट्टिी रेलिङहरु समातेर सिँढीहरु उक्लँदै २०० खुड्लिा उक्लिएपछि शुरु हुन्छ । मकालु हिरक पार्क भने यहाँबाट आधाघन्टा बसमा गएपछि कप्दाने पोखरी किनारमा डाँडाहरु सम्याएर निर्माणधीन छ । कप्दानेको एतिहासिकता र मनमोहक दृश्यले जसकसैको मनलाई सुम्सुम्याउँछ ।
चिचिलाबाट वानटेन ट्याक्सीमा चढेर तीन घुम्ती पार गर्दै दम्स्याइलो ओरालो झरेर हल्का करिमकरिम तेर्सो गएपछि ३० मिनेटमा पोखरीको किनारमा गाडी पुग्छ। हरियो दुबोले ढाकिएको मैदानमा ओर्ले पछि मैदानको किनारमा मत्यपोखरी छ । पोखरीको पश्चिमपट्टि पर्ने असाध्य सुन्दर दुबोले ढाकेको हरियो मैदामा फुटबल पनि खेल्छन् । उत्तरपट्टि ढुङेन ढाँण छ तर बिभिन्न प्रजातिका रुखपातले ढुङ्गाहरुलाई नदेखिने गरी छोपेको छ । पूर्वोत्तरपट्टि जालपा देवीको मन्दिर छ । दक्षिणपूर्वमा बढेमानका पत्थर कुँदेर बसाहा, कछुवा, महादेवका आकृतिहरु कुँदिएको छ । पश्चिमपट्टि बिशाल प्रस्तरमा बुद्धको प्रतिमा खोपिँदै छ । पोखरीको डिलमा महादेवको मन्दिर छ । दक्षिणपट्टि पोखरीको निकासबाट निसृत कन्चन र निर्मल पानीको केही अंश उपयोग गरेर पन्चधारा बनाइएको छ । पोखरीको वरिपरि अत्यन्ता राम्रो वाल छ र स्टीलको रेलिङले बारेको छ । रेलिङको वरिपरि विभिन्न प्रजातिका फूलहरु रोपिएका छन् । पोखरीको दक्षिणपट्टि मैदानको एकस्टेप मुनि चौतारो छ, चौतारामा पाटी छ, लामो फलैँचा पनि छ । यहाँबाट दृश्यावलोकन र छयाङ्कन राम्रोसँग गर्न सकिन्छ । चलचित्र छयाङ्कन गर्न जाने हो भने यो पर्यावरणलाई स्वर्गको दृश्य भन्न पनि सकिन्छ ।
मत्श्यापोखरी ओरिपरि गुरुङ जातिको मात्र बसोबास छ । अधिकांश लेगइ गुरुङ, घ्याब्रे गुरुङ र पैँजो गुरुरङको बसोबास छ । घ्याब्रे गुरुङहरुको किरिया कर्ममा लामाले एकपाटे ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने र खरानी बुकाउने अनौठो सँस्कृति छ । पोखरी वरिपरि गुरुङहरुको ५० घर छन् । दुइचार पसलहरु छन् । लेगइ गुरुङहरु यहाँका जिम्मावाल थिए । पदमबहादुर गुरुङका बाबु स्व। दिलबहादुर मुखिया थिए । आजभन्दा १०० बर्ष अघि दिलबहादुरको हजुरबा धोजु गुरुङले अछामबाट आउँदा माछाको बिउ ल्याएर हालेका हुन् भनी टङकबहादुर र पदमबहादुर गुरुङ बताउँछन् ।
पोखरीको पानीले लगभग ६ रोपनी क्षेत्रफल ढाकेको छ । वल्ला छेउमा ३० मिटर चौडाइ छ, पल्ला छेउमा १० मिटर छ । ३० मिटर चौडाइ भएको भागको लम्बाई ३० मिटर र क्रमशः घट्दै गएको लम्बाइ ५० मिटर गरी ८० मिटर लम्बाइ छ । गहिराइ चाहिँ वल्ला छेउमा साढे चार फिट बिचमा ७ देखि दश फिट र पल्ला छेउतिर पौडिन नसक्ने मान्छे जान सक्दैन । जलाशय बाहेकको भाग बोजोले ढाकेको थियो । २०४४ साल कुसे औसीका दिनदेखि यो पोखरीमा सफाइ अभियान शुरु गरिएको हो । पानी नीलो, कन्चन र शीतल छ । सफा यति छ कि माछाहरु नाचेको बाहिरबाट छर्लङ्ग देखिन्छ । यहाँका माछाहरु सभाखोलाबाट खेल्दै आएका हुन् पनि भनिन्छ ।
राता, पहेँला, छिरबिरे र कल्सौदा हल्का कालो रङका माछाहरु पाइन्छ । भुरा देखि निकै ठूला माछा पनि छन् । वजनबाट भन्दा डेढ किलो सम्मका माछा पनि देखिन्छन् । सबै आकारमा माछा छन् । हजारभन्दा बढी नै सङ्ख्यामा होलान् । भुजा चामल आदि लगेर पोखरीमा हालेपछि सारा माछाहरु बिटो परेर आउँछन् । डल्फिनजस्तो पानीको सतहमाथि पनि पो नाच्दै चारो लिन्छन् । माछाहरु भाग्दैनन् । मार्न पनि पाइन्न । मा¥यो भने असिना, पानी, बाढी, पहिरो, महामारी हुन्छ पनि भन्छन् । २०४७ को चुनावमा काँग्रेसका कार्यकर्ताले माछा मारेर सुकाएको आधाघन्टामा असिना पानी परेर मकै सोत्तर पारेको र यही कारण यहा काँग्रेसले चुनाव हारेको त पङ्तिकारले प्रत्यक्ष देखेको हो । पोखरीको निकास झण्डै ३०० मीटर झरेपछि देवीथिान आउने देवीथानमुनि चाहिँ माछा मार्न पाइन्छ । यहाँका माछा मछेखोला, ओरङखोला, लङखुवा खोला, हुँदै सभाखोला पुग्छन् । अरुण, सप्तकोशी, गङ्गा नदी हुदैँ समुद्र्र पुग्दा हुन् र समुद्रबाट पनि खेल्दै यहा आउँदा हुन् । यो चक्र चल्दैन भन्न सकिन्न । सबै माछा असला हुन् । करिब ४०० जति माछा पोखरीभित्र खेल्छन् । हुरुरुको कप्दाने पोखरीबाट भूमिगत मार्ग हुँदै मत्श्यपोखरीमा आएको निकासले मत्श्यपोखरी बनेको हो भनिन्छ ।
दुनियाँमा माछा र पानी नभएका ठाउँमा मछेन्द्रनाथको मन्दिर छ । मछेन्द्रनाथको रथयात्रा गराइन्छ । प्राकृतिक माछा भएको मछेपोखरीमा भगवानको प्रथम अवतार मत्श्यावतार रहेको छ । यहाँ मछेन्द्रनाथको मन्दिर र मछेन्द्रनाथको रथयात्रा गराउने हो भने धनकुटा, भोजपुर र तेह्रथुमदेखिका यात्रीहरुको ओइरो लाग्न सक्छ । प्रचार प्रसार गर्न सके चलचित्र निर्माताहरु पितृ स्वर्ग पुगेको दृश्य छयाङ्कन गर्न यहाँ आउँछन् । दुनियाँका मैहुँ भन्ने राष्ट्रका नागरिकहरुको लाम थामिनसक्नु हुन्छ । चिचिलाको मात्र होइन, नेपालकै एउटा पर्यटन गन्तब्यको रुपमा बिकशित भई यो ठाउँ साँग्रिला बन्छ । स्थानीय स्तरमा रोजगारी र ब्यापार बृद्धि भई राष्ट्रिय आय बढ्दछ । मत्श्यपोखरी नेपालको पर्यटन मन्त्रालयको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भित्र पर्नु आवश्यक छ । साँस्कृति र धार्मिक महत्वका हिसाबले पनि यसको महत्व छ । मानिसहरु यहाँ बर्षेनी जनै पूर्णिमामा जनै धारण गर्न आउँछन् । काित्तक मङ्सिर महिनामा पर्ने तिहार पर्वपछिको पूर्णिमाका रात यहाँ परम्परागत मेला लाग्छ । मछेबजार भनेर सयौँबर्ष अघिदेखि लाग्न शुरु भएको यो मेला शेर्पाको स्यप्रु, तामाङको सेलो, लिम्बुको धाननाच, आर्यनको भजनकीर्तन, याम्फूको च्याब्रुम्, मारुनी जस्ता साँस्कृति नाचको मौलिक र जीवन्त प्रस्तुतिको रङ्गन्च पनि हो । मत्श्यपोखरी बौद्ध, किराँत र हिन्दू धर्माबलम्बीहरुको समान आस्था, विश्वास र सम्मानको धरोहर हो भने मछे मेला बहुल जातीय सँस्कृतिको गौरवमय विरासत हो ।
दुर्लभ र लोपोन्मुख पानीमकै : जुम्ली मार्सी धानभन्दा कम छैन ।
अचम्म यही पोखरीको वरिपरिका पखेरा बारीहरुमा संसारमा अन्त काहीँ नपाइने पानी मकै फल्छ । पानीमकै जेठ महिनामा छरेर जरामा धान खेतीमा जस्तै पानी लगाइन्छ । धानमा जस्तो जमाउने र गहूँमा जस्तो पटाउने, फूलमा जस्तो माथिबाट छर्किने होइन । पानीमकै त छड्के, करालो, ओरालो पाखा, सुर्के गरामा छरिन्छ र खोलाबाट दर्जनौकुलो लगेर जरामा छाँगाले ठोक्किने गरी बगाइन्छ । भ्याए एकपल्ट गोडिदियो नभ्याए पनि छरेपछि भाँच्न जाँदा मुठ्ठीमा घोगा आउँछ । गोडेको र नगोडेकोमा अलि फरक पर्छ । गोडेपछि केही समय पानी लगाइन्न ।बेलाबेलामा कुलो मारिन्छ । मकैका दाना लागेर रस पसिसक्यो अब १० आठ दिन पछि भाँच्ने हो भन्दा पानी मारिन्छ । रोपेको छ महिनातिर असोज, कार्तिकमा थन्क्याइन्छ ।
मसिना गेडाहरु हुने पानी मकैको रङ्ग सेतो र खोया अलि पातलो, खोसेल्टा हल्का र नरम, जुँगा छोटा, बोट होचा, साना र जराहरु भने तीन तहसम्म उम्रिएर जमिन समातेको पाइन्छ । पानीमकै चपाउदा कमलो, रसिलो, पोषिलो, स्वादिलो हुन्छ । भुट्दा भररर फूल उठ्नु यसको बिशेषता हो । पोल्दा अरुभन्दा छिटै पाक्नु, चामल बनाएर भात खाँदा पनि मार्सीको भातजस्तो स्वादिलो हुनु यसको बिशेषेता हो । पानीमकै फल्ने ठाउँहरुमा अलैँची सप्रिने भएकाले अलैँची पानी मकैको सौता बनेको कारण पानीमकै लोप हुने खतरा छ । चिचिला गाउँपालिकाले पानीमकै संरक्षण समिति बनाएर, पानीमकै उत्पादन क्षेत्र बनाएर, बीउ संरक्षण कार्यक्रम राखेर यही मत्श्यपोखरी वरिपरिका एक डेढसय रोपनी जगामा मात्र खेती हुन्छ ।
प्रचारप्रसार, बजार र कृषकहरुमा ज्ञानको अभावमा संसारमा नपाइने सङखुवासभाको मकालु र चिचिलामा मात्र पाइने पानीमकै अब मकालुबाट पनि बिस्थापित भयो । चिचिला १ बाट पुरै बिस्थापित भएर अब चिचिला ४ मत्श्यपोखरी मात्र संरक्षित छ । लोपोन्मुख दुर्लभ पानी मकैको प्रचारप्रसार गरेर जुम्ली मार्सिजस्तै किन नबनाउने ?
नेपालका प्रसिद्ध सँसकृतिविद् एवम् नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिज्यूलाई नेपाल राज्यको प्रदेश नं. १, सङ्खुवासभा जिल्ला अन्तर्गत चिचिला गाउँपालिका वडा नं. ४ मा अवस्थित सँस्कृतिक महत्व र प्राकृतिक सौन्दर्यले परिपूर्ण निर्मल जल र माछाहरु पाइने, पानीमकैको पकेट क्षेत्र समेत रहेको धार्मिक एवम् पर्यटकीय तीर्थस्थल मच्छेपोखरीमा यही मिति २०७८ मङसिर ३ गते मकालु साहित्य समाज सङ्खुवासभाको आयोजनमा र चिचिला गाउँपालिकाको बिशेष उत्प्रेरणामा सम्पन्न हुने साहित्यिक साँस्कृतिक महोत्सवको प्रमुख अतिथिका रुपमा सम्मानपूर्वक निमन्त्रण गरिएको छ ।
२०७८ मंसिर २ गते बिहान तुम्लिङटार अवतरण ।
दिउँसो तमु समाजको आयोजनामा भेटघाट ।
बेलुकी खाँदबारीमा बसोबास ।
मंसिर ३ गते : ट्याक्सीबाट पत्रकार तथा कलाकारको साथमा १० बजे मच्छेपोखरी पुग्ने र कार्यक्रममा सरिक हुने ।
मंसिर ३ गते बेलुकी : चिचिला बजारमा बसोबास ।
मंसिर ४ गते : हवाइजहाजमार्फत काठमान्डौ रवाना ।
अन्य जानकारीको लागि : प्रस्तावनापत्र र मत्श्यपोखरीको परिचयपत्र संलग्न राखिएको छ ।
साथमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङ प्रमुख आतिथिका रुपमा मत्स्यपोखरी जाने, बरिष्ठ साहित्यकार एवम् पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल बिशिष्ट आतिथि रहने, इन्द्रेनी टिमको दोहोरीका साथ सम्पन्न हुने तयारीमा रहेको यस साहित्यिक साँस्कृतिक महोत्सवमा अतिथिका रुपमा सम्मानपूर्वक सबैलई निमन्त्रणा गरिएको छ ।